ဂျူနီယာဝင်း - ကြောက်တာတခုပဲသိတယ် - MoeMaKa Media
Home / Community / Coup / Experience / Junior Win / Spring Revolution / ဂျူနီယာဝင်း - ကြောက်တာတခုပဲသိတယ်
Community, Coup, Experience, Junior Win, Spring Revolution
ကိုယ့်အဘိုးအဘွားတွေလက်ထက်တုန်းကတောင် ထမင်းအိုးတန်းဟင်းအိုးတန်း ဝင်ခဲ့သေးတယ် ။ သူတို့မြေး ကိုယ့်လက်ထက်ကျမှပဲ ထမီတန်းအောက်က မထွက်တော့တာ။ ဆိုတော့ ကိုယ်လည်း ကိုယ်ရေးချင်တာလေးတော့ ရေးခဲ့ဦးမှပါ။ အထင်တော့မကြီးလိုက်ပါနဲ့ ကိုယ်လုပ်တာဆိုလို့ ကြောက်တာတခုပဲ ရှိပါတယ်။
အမှန်ကိုဝန်ခံရရင်တော့ ကိုယ့်မိခင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပီးတဲ့နောက်မှာ ပရိတ်များမရွတ်ခဲ့ စိတ်ပုတီးမစိတ်ခဲ့တာ ဆိုပါတော့။ ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘူးလားလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ပရိတ်တွေ မရွတ်မဖတ်ခဲ့တာ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိပါ။ ပြစရာလည်မ လိုပါ။ ဒါပေမယ့် တရားတော့ထိုင်ပါတယ်။ စွန်းလွန်းဝိပဿနာကို အားထုတ်ပါတယ်။ ကြိုးစားပီးတော့ပေါ့။ ကိုယ့်စိတ်တွေ တည်ငြိမ်အောင် အချိန်တွေ ကုန်မြန်အောင်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ခုထိ စိတ်လှူပ်ရှားလွယ်နေတုန်းပါ။ စိတ်ကလည်း တခါတခါ မထိန်းနိုင်တုန်းပါပဲ။
အခုတော့ ဘုရားစာတွေ ပြန်ရွတ်တာ အမြီးအမောက်မတည့်တော့ဘူး။ မရွတ်တာလည်း ကြာပီကိုး။ ဒါနဲ့ ဘုရားစာအုပ်တွေ တော်တော် ပြန်ရှာရပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းမှန်အောင် ပြန်ဖတ် ပြန်ရွတ်ဖတ်နေရပီ။ မကိုင်ဖြစ်တဲ့ စိတ်ပုတီးလည်း ပြန်ကိုင်ဖို့ စိတ်ကူးပါတယ်။ ဘဝမှာ မလုပ်ဖူးတဲ့ အဓိဌာန်တွေဘာတွေတောင် ဝင်ဖို့ ကြိုးစားတော့မယ်။
ကိုယ်တွေရဲ့မွေးနေ့လေး အမှတ်တရ ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ မွေးနေ့မှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ရှိတာလေးဖြစ်သလို စားသောက်ဖြစ်တာပါပဲ။ အဲဒီနေ့မယ် သေနတ်သံတွေ ညဘက် တောက်လျောက်ကြားနေ ရတယ်။ အမယ် … ကိုယ်တွေတော့ တော်တော် တိုးတက်လာတယ်။ ဟောဒါက အသံဗုံး ၊ ဟောဒီအသံက လက်ပစ်ဗုံး ၊ ဟောဒီအသံက တကယ့်ဗုံး သိနေပီ။ မီးတောင်မဖွင့်ဝံ့ဘူး။ လရောင်ရဲ့ အရိပ်ကလေးကို ခိုပီး ဘုရားစာအုပ်ကြည့် စာလုံးပေါင်းမမှားအောင် ဖတ်နေရတယ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်တောင် ကျပါတယ်။ ငါတို့အဖြစ် အဘိုးအဘွားများ မြင်ရင် ရင်ထဲ ဘယ့်နှယ့်နေရှာမလဲ။
နေ့ခင်းကြောင်တောင်တောင် ဗုံးတွေပေါက်နေပါတယ်။ လမ်းပေါ်လည်း ပေါက်နေတယ်။ ကြောက်တာပေါ့။ ခက်တာက စားစရာမရှိတော့ စျေးထွက်ဝယ်ရတယ်။ ရှေ့ကြည့် တောင်ကြည့် မြောက်ကြည့်။ မတော်တဆ ကိုယ့်ရဲ့ ကားဘီးတွေ အန္တရယ်ဝင်တိုးမိရင် မတွေးဝံ့စရာ။
အကြားအမြင်တွေ ဗေဒင်ဆရာတွေက ဟောတာတွေ ကြားတာပဲ။ သူတို့က လူတွေရဲ့ ကံကြမ္မာ က အခုတော့ တကယ်သေရေးရှင်ရေးဖြစ်နေပီတဲ့။ သတိသာ ထားနေကြတဲ့။ အစားအသောက် ၁လစာကနေ ၃လစာလောက် ရှာထားစုထားတဲ့။ ဗုံးခိုကျင်းတွေတောင် တူးထားကြတဲ့။ အသက်ကို ဖက်နဲ့ထုတ်ထားဖို့ ကို ပြောသံတွေကြားတာပဲ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ကိုယ်ကတော့ တခြားဟာတွေ တွေးနေမိတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲ တွေ့ဖူးတာပဲ သေခါနီးသူတွေက မသေခင် နောက်ဆုံးစကားတွေ ပြောကြ မှာကြတာတွေ။ အဲဒီတော့ ကိုယ်လည်း ပြောမယ်လေ … “ကိုယ်သေသွားခဲ့ရင် ကိုယ့်အချစ်ဆုံးမင်းကို …“ (ရိုဆက်တီရဲ့ ကဗျာမဟုတ်လား။ တခြား လေးနက်တာလေး ပြောတာပိုကောင်းပါတယ်။)
ပြောချင်တာတွေရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အဝေးက မိတ်ဆွေတွေ ချစ်ရသူတွေဆီ မက်ဆေ့တွေ ပို့တယ်။ ကိုယ်က မဆိုးပါဘူးကွယ်၊ ကိုယ်က တကယ်တော့ မရိုင်းပါဘူး … စသဖြင့်။ ဟုတ်တယ် … ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ရှိတယ်လေ၊ အပြစ်တွေကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ တောင်းပန်ရင် တဖက်သားကလည်း ခွင့်လွှတ်ကြတာမျိူး။ အထူးသဖြင့် သတင်းကျွတ် လူကြီးမိဘကန်တော့ကြတဲ့အခါ အဲသလို ပြောဆိုကြတယ်ဆိုတော့။ ကိုယ်လည်း လျောက်တွေးနေမိတာပါ။
ကိုယ်နေတဲ့မြေက နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေ မနင်းတဲ့ အရပ်ပါ။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကိုယ့်မိခင်ကို မလွမ်းမိပါဘူး။ ၂၀၂၀ မတိုင်မှီ ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိခင်ကို အခုအခါမယ် တကယ် မလွမ်းတော့ပါဘူး။ ၂၀၂၀ ကိုဗစ်နှိတ်စက်တဲ့ဒဏ်တွေ မတွေ့သွားရလို့ပေါ့။ ဆိုးဝါးတဲ့ ခေတ်ကြီးကို မကြုံလိုက်ရလို့ပေါ့။ တော်ပါသေးတယ် မေမေရယ်။ မေမေသာဆို ခံနိုင်ရည်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပဲနေမှာပါ။ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ကြုံနေကြရမယ်။ ဖြစ်လာသမျှ ရင်ဆိုင်သွားကြရမယ်။ ကိုယ်တောင်းတဲ့ဆုတွေ ပြည့်ဖို့ဆို … ရတနာသုံးပါး ဆည်းကပ်၊ ငါးပါးသီလ တတ်နိုင်သလောက် စောင့်ထိန်းပီး၊ လောဘ ဒေါသ မောဟ ကင်းအောင် ကြိုးစား နေကြရမယ်လေ။
by Junior Win • June 9, 2021 •0Comments
I tear off the chapter of shame in our country’s history. Thus I open with the following chapitre my actual experiences during the time of horrible happening, see to be no more than an ordinary citizen. But don’t judge highly of me. I was justacoward that die many times before dead. I do nothing except being scared.
Telling the truth, I gave up praying, and reading or reciting Buddha Parrita Pali Suttas since my mother passed away. It doesn’t mean that I was notaBuddhist any more. I just stopped it for no reason. But I still did meditation for the reason that for my mind to be calm and peaceful. (Well, don’t think of me high, I am still restless. My life is still likeafool’s paradise.).
When the whole country becameahuge concentration camps, and our life was in danger, I tried to recite Buddha Parrita Pali Suttas. I believe It gave protection from dangers. But I forgot some of Parrita Pali Suttas that I used to recite by heart some years ago. So, I searched Pali Parrita Suttas books at my grandpa’s bookshelves. Luckily, I found some booklet of it. I tried to read some of them with correct pronunciations.
(‘Whatacoincidence! Today is our birthday!’)
At the night of the 14th March of 2021, there were shootings around us. By the lit of the moon, I read carefully and recited word by word of Parrita Pali Suttas. I was praying, and praying. My wishes to safe from this terrible situation to all the people around me.
(‘Please help my cat, dear doctor.’)
My dear cat was sick during that horrible time. I called the vet but the doctor could not risk her life to come and see my cat. (We have onlyaless than one kilo apart!) I also could not dare to go outside under the situation. Soldiers were near us. My heart was broken when my cat was dying. I could do nothing except staying near him.
(‘OMG! What are these?”)
(Drawing by Maung Yit – cartoonist.)
(On that day, I did not forget to wear mask. But my brother, cartoonist – Maung Yit forgot to draw the mask. So, please fill in with your imagination, thanks.)
Bombs exploded under the broad daylight, explosion blasted even on the road. I was scared. But when I needed food, I drove to the market with careful driving. I was afraid the wheels met the explosion! My heart was always beating all the time.
War is really coming to us?
Rumors are everywhere. They are going to kill us. The astrologer predicts that this month will decide the future. The fate of people will be at risk. Digabomb shelter for your safety. You should have to keep foods foramonth or more. Unfortunate people may sacrifice their life in this month. Remember, some are born victims. (I don’t know I was born what?) Keep doing good deeds, and reciting Buddha Parrita Suttas 24/7. Pray for your life, etc, etc…..
I don’t want to believe whatever they said. I think of something else. If the war is really coming, we should have to leave the last words to our loved ones. Yes, of course, I saw it in the movie! People said the last wishes or the last words when they were dying or the last day came. So, let me say like, ‘when I am dead, my dearest.’ (Haha! Are you writingadrama? Say something serious.).
I sent messages to my loved ones. I would like to say I was not so bad or have not been so rude. Of course, I have to apologize to whom it may concern before too late. In the Buddhist way of life, people ask forgiveness to the person for any wrongful action or hurt we do to them, and the person will accept with their truthful heart (I hope so!).
(… Don’t worry about me, …..I am still alive, I am still in one piece…..
I can make everything okay, …. )
(Dawing by Maung Yit)
I am glad for the first time in my life, for my mother who passed away before 2020 for she never knew what the awful taste of covid-19 and the harrowing experience how was like. I also am glad for my friendly friend who found somebody new before 2021, no need to share any more the nightmare I have to go through.
How my life will go on, I still was praying nor only for my safety, but also for all the people, my loved ones, enemy or foes around the world protect from dangers or calamities or natural disasters.
ဂျူနီယာဝင်း - ကြောက်တာတခုပဲသိတယ် Reviewed by MoeMaKa on 6:34 AM Rating: 5